Xabsigii aan mar maxbuuska ka ahaa ayaan hadda ilaala ka ahay - Bulsho News
Askeri muddo suuxsanaa oo markii uu soo miyirsaday loo sheegay...
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Kabul waxaa kamid ahaa markii ururka Daalibaan ay ku guulesteen in maxaabiis ay kasii daayaan xabsiga dhexe ee caasimadda Afghanistan.
Waxaana dadka xabsigan lagu xiri jiray kamid ah dagaalyahanada Daalibaan.
Waxaa xabsiga hadda waardiye ka ah xubno ka tirsan Daalibaan oo mar halkan ku xirnaan jiray.
Xabsiga Pul-e-Charkhi ayaa waxaa mar isku hareereeyay dagaalyahanada Daalibaan oo soo furtay kumananaan maxaabiis ah oo halkaa ku xirnaa.
Weriyaha BBC Jeremy Bowen ayaa loo ogolaaday in uu gudaha u galo xabsigan oo ay hadda ilaaliyo ka yihiin dagaalyahano Daalibaan oo halkan horey loogu xiray, waa xabsi caan ah tan iyo markii Ruushka uu qabsaday Afghanistan sanadihii 1980s.
Waxaana maxaabiista laga sii daayay xilliggaas lagu fasaxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Kabul, waxaana la arkayay iyagoo raxan raxan u u socda, maxaabiista ay ururka kasii daayeen Pul-e-Charkhi waxaa kamid ahaa xubno ka tirsanaa ururka isku magacaabay Dowladda Islaamka.
“Kani waa xabsi ay nolol adag ka jirtay, waxaana dhex qulquli jirtay baraanbarta, wuxuu ahaa wasakh” ayuu yiri weriyaha BBC-da oo booqday xabsiga.
Xafizullah Afzal oo ka tirsan Daalibaan haddana kamid ah ilaalada xabsiga ayaa sheegay in muddo 10 sano uu ku xirnaa xabsigan.
Wuxuu sheegay in garaac iyo jirddil loo geystay muddadii uu ku xirnaa xabsiga hadda uu ilaalada ka yahay.
“Markii aan halkan ku xirnaa garaac iyo jirddil ayaa la ii geystay, waxaan ku biiray Daalibaan markii lasoo weeraray tuuladii aan ku noolaa”
Xafizullaah ayaa intaas ku daray in dhibaato iyo dil loo geystay bulshada deegaanka intii ay socdeen howgallada Mareykanka iyo ciidamada Afghanistan.
“Wey nasoo weerareen isla markaana waxay dileen carruurteena, dhammaan msulimiinta dhibaata ayay la kulmayeen, gurigeyga ayay iigu soo galeen waxay iga qaateen Kitaabkeygii Qur’aanka kadibna inta ay jeexjeexeen ayay tuureen”
Maxaabiista hore ee xabsigan ee hadda ilaalada ka ah isla xabsiga
“Nafteyda inaba raalli kama aheyn waxa ay igu sameeyeen, waxay dadkaas ahaayeen Amerikaan iyo Afghanistan” ayuu yiri Xafizullah Afzal.
Taliban ayaa xukumayay Afghanistan tan iyo sanadkii 1996 ilaa dabayaaqadii 2001, markaas oo ciidamada Mareykanka ay xukunka ka tuureen.
Inkastoo ay 20 sano dagaal ku jireen ayna ka dhinteen tobnaan kun oo dagaal-yahanno Taliban ah, haddana awoodda maamul iyo militari ee kooxda ayaa sii kobceysay sanadihii la soo dhaafay.
Qeybihii dhexe ee sanadkan 2021 waxay heysteen qiyaastii 70,000-100,000 dagaal yahanno ah, iyagoo toban sano kahor heystay keliya 30,000, sida laga soo xigtay Mareykanka.
Bruno Fernandes: Man United Waxay Ku Soo Cel-Celinaysaa...
Will China’s plan to build more coal plants...
ASEAN chair Brunei confirms junta leader not invited...
Daawo: Van De Beek Oo Bahdilay Ole Gunner...